Home Wararka Xog ku saabsan Xarunta Oto Oto, Weerarkii Shabaab & Cabsi xoogan oo...
Xog ku saabsan Xarunta Oto Oto, Weerarkii Shabaab & Cabsi xoogan oo ka taagan Villa Somalia ee…
Kooxda Shabaab ayaa maanta weerar xoogan ku qaaday xarunta Oto oto oo ka mid ah xarumaha saldhiga u ah DFS.
Hadaba Maxaad Ka taqaan Xarunta Oto Oto.
Xarunta Oto Oto: ka sokow inay aheyd Xarunta Wasaaradda Arrimaha Gudaha, waxay kaloo aheyd xarunta Wasaaradda Amniga Gudaha oo sanad ka hor loo soo raray, sidoo kale waxay aheyd xarunta War la liska Booliska ee taleefanka loo yaqaano 888.
Sidoo kale,waxayna xarunta 888 oo ah dhismo labo Wasaaradood oo muhiim ah ay ku shaqeeyaan waxay ku taalo barta ciidan ee ugu horeyso ee laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya,waxaana ku dhow xarunta Golaha Shacabka Soomaaliya.
Dhowr jeer ayay Al-Shabaab weerar Qaraxyo ah ka fuliyeen Afaafka hore ee xarunta OTTO OTTO,halkaasi oo ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyi dhaawac.
Weerarka maanta ay Al-Shabaab dhimahaasi ay ka fuliyeen ayaa waxaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhawaac,waxaana dadka dhintay ku jira shaqaalo ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya.
Kooxda Shabaab ayaa sheegatay Weerarka, waxaana soo baxaya warar sheegaya in ciidamada DFS ay dadaal xoogan u galeen iney fashiliyaan qorshihii weynaa ee weerarkaas loo soo abaabulay.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in weerarku ku bilowday labo qarax oo ismiidaamin ah kadibna ay sedex shaqsi gudaha ugaleen xarunta Oto Oto.
Waxaa ay ciidamada DFS soo gaba-gabeeyeen inta badan holwgalka, waxaana la dilay dagaalamayaashii Shabaab.
Maxaa ka socda Villa Somalia.
Wararka laga helayo xarunta madaxtooyada ayaa sheegaya in heegan xoogan la geliyay ciidamada amaanka.
Cabsida ugu xoogan ayaa timid kadib markii la jibiyay difaacii ugu weynaa ee madaxtooyadda oo ah xarumihii amniga iyo gudaha oo ku dhow Sayidka oo ah halka laga galo Villa Somalia.
Saraakiisha ciidamada madaxtooyadda ayaa joojiyay dhaq dhaqaaqyadda qeybo ka mid ah isu socodka gudaha Villa Somalia.
Si kastaba, xaaladda MUQDISHO ayaa ah mid maanta kacsan inkastoo DFS ay dadaal ugu jirtay xaqiijinta amaanka caasimadda.
Previous articleSidee Axmed Madoobe uga hadlay Weerarkii maanta ee Otto Otto,Shaaciyeyna Ujeedka Al-Shbaab?
Next articleC/raxman C/shakur oo Hal Arin darteed Qalbi Dhagax kaga Codsaday inuu Mucaaradka kusoo biiro
Taliyaha Booliska Soomaaliya Oo Tababar U Soo Xiray Saraakiil Katirsan Ciidamada...